Kutora Mweya weIceland neNew Reykjavik Standard yeLuxury
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kutora Mweya weIceland neNew Reykjavik Standard yeLuxury
Inobudirira nzvimbo yekudyira ine maresitorendi anotonhorera, hupenyu hwehusiku hunotenderera uye epic mimhanzi chiitiko, iko kupenya kuri kupenya zvakajeka paIceland guta guru rehudyu uye, neyakajairika finesse, kusvika kweiyo The Reykjavik DZIDZO inowedzera kumisikidza EDITION Mahotera 'emashiripiti kugona kugara mune nzvimbo chaiyo panguva yakakodzera.
"Reykjavik iguta rinotonhorera chaizvo, diki - rakanakira brand yedu," anodaro Ian Schrager, piyona anoona nezve pfungwa yemahotera emahotera, PUBLIC uye EDITION musiki. "Tinofunga iyi inguva yaReykjavik uye tiri pano chaipo pazvo uye panguva yakanaka."
Kuvhura mukutarisa munaNovember 9, 2021, Iyo Reykjavik DZIDZISO ichaisa mwero mutsva seyakatanga yegoridhe yakasarudzika ruzivo rweguta, ichibatanidza zvakanakisa zveguta reIcelandic neruzivo rwehukama, rwepedyo uye rwemunhu ruzivo rweCHIDZIDZO chinozivikanwa. Mhedzisiro yacho ine hunyanzvi uye yehunyanzvi hweguta rine makamuri makumi maviri neshanu, mutsetse wakakwenenzverwa wemabhawa, siginecha yekudyira uye kirabhu yemanheru uye, mune yechokwadi YEMAHARA manyorerwo, kuunzwa kwerudzi rutsva rwepfungwa yemazuva ano yehutano hwevanhu. Munyika yematsime anopisa, mamineral emvura uye echinyakare fjords, ichi chinogadzira hunyanzvi, visceral manzwiro ruzivo uye chokwadi chaIan Schrager, pamwe neyakareba yekushanda kwehunyanzvi hweMarriott International uye kusvika kwepasirese, zvinoguma nechipo chakasiyana zvachose icho chinosimudzira kukura kwaReykjavik kukwezva senyika yepasirese yekune dzimwe nyika kuenda.
Iceland inzvimbo inoshuvira vazhinji, iri-pakati peNorth America neWestern Europe - yakawedzera nzira dzendege, nenzvimbo yayo yepasi rose, ichikwevera vashanyi vanobva kure nekure. Iyo Reykjavik YEMAHARA ndiyo yekutanga yechokwadi mhando yemhando yepamusoro inopinda mumusika iyo ine zvivakwa uye masevhisi senge chero imwe. Kutanga kuonekwa pamepu apo ambuya weAmerican chess Bobby Fischer akahwina mukombe weWorld Chess Championship muReykjavik muna1972, Schrager, uyo aitevera chiitiko ichi panguva iyoyo, anoti akashamiswa nerunako rwenyika rwusina kusvibiswa, nerunako. Chokwadi, yakakwenenzverwa muNorth Atlantic Ocean, pasi peArctic Circle, Iceland iri chaizvo mukugadzira, inogara ichichinja nzvimbo mhedzisiro yemakomo anopopota, anotubuka matsime anopisa, anoputika magiza uye achichinja mahwendefa etekoni. Zvese izvi zvakakonzera kunoshamisa, kusanzwisisika medley yakajeka moss-yakazara makara minda yemarara, inokwira mazaya echando uye makomo makobvu akachekwa nemipata yakadzika, yakatemwa nerwizi. "MuIceland, wave kuona zvinhu zvausingaone kune imwe nzvimbo," anodaro Schrager. "Kupfuura chero imwe nzvimbo yepanyika, iwo mukana chaiwo wekubatana nepasi nezvakasikwa uye tinodada nekuwedzera zita reEDITION munzvimbo inoshamisa ine hotera inonakidza zvinokupa pfungwa yechokwadi nzvimbo. ”
Achishandisa Midas kubata kwake, Ian Schrager akanyatsobata pamuviri, akafunga uye akaronga hotera kuti igadzire alchemy uye pfungwa yemashiripiti chete kune ino hotera. Iyo Reykjavik YEMAHARA yakagadzirirwa mukubatana pamwe neyakavakirwa femu yezvivakwa, T.ark neNew York-based studio, Roman naWilliams nekutungamirwa kweISC (Ian Schrager Company) dhizaini, zvine hungwaru zvinotora mweya weReykjavik uku uchidzivirira zvimisikidzo uye uchiramba wakadzika midzi mu iyo DZIDZISO brand yakasimba pfungwa yekunatsiridza kugona uye chimiro. Pane chiteshi chengarava, pakatarisana neakanaka makomo maonero, hotera iri munzvimbo isina chaiko pamoyo peguta: padhuze neHarpa, iyo inoshamisa konzati horo uye musangano musangano - uyo ane mavara ane girazi façade rakagadzirwa neanopembererwa muIcelandic neDanish muimbi Olafur Eliasson - uye maminetsi mashoma kubva kuLaugavegur, iwo mugwagwa mukuru wekutengesa mudhorobha reReykjavik.
Kubva kunze, Iyo Reykjavik YEMAHARA kuwedzera kunoshamisa kune ino yedhorobha nharaunda. Yayo ebony façade ye shou sugi kurambidza matanda yakavezwa kuti isvibiswe pachishandiswa chinyakare chiJapan nzira, uye yakasviba simbi mafuremu iri pachena kujekesa kune inoshamisa nzvimbo yeIceland yemabota. Mitsara yakapfava, yakachena yechivako pachayo yakave yakakomberedzwa kuti iite zvakanyanya maonero uye nharaunda yayo ine chiteshi chengarava ine nzvimbo yekupinda mbiri yekupinda inowanikwa kubva kune vanofamba netsoka Harpa plaza, kana iyo Harbor. Iyo yekupedzisira - mupfungwa huru yekusvika yakafanana neThe Times Square YEMAHARA - inoratidzira canopy, yayo yepasi yakavhenekerwa ne12,210 girazi ma LED node.
Sezvo neese emahotera eEDURE, iyo yekutandarira inzvimbo ine simba, yemagariro inonyatsoburitsa pachena pfungwa yenzvimbo uye nguva yenguva. Pano, dombo rebasalt - kana dombo rinoputika - rakakurumbira, richionekwa pafloor, iro rakaiswa nemhando yakaoma kunzwisisa yakafuridzirwa neIcelandic geometry, uye tafura yekumira yekuveza tafura. Muchikamu chekuchengetedza nzvimbo, timu yeICC yakawedzera dombo reIcelandic dombo rakavezwa kuti rienzanise zvinhu zvinodziya senge rakagunzva chigaro cheganda rakaputirwa nekoramu dzekongiri - uye chena oak flooring, matanda edenga uye slats, ayo ari padivi peiyo nzvimbo yekutandarira. Lobby bar chinwiwa menyu inotarisana newaini yepasi rose nekusarudzwa kwegirazi uye zvekare cocktaileja neIcelandic twist. Imba yekutandarira ine nzvimbo yepakati yemoto yakavhurika inova nzvimbo yemoto, yakakomberedzwa nezvigaro uye muunganidzwa weyakagadzirwa-fenicha mumapoka ekugara, akadai saJean-Michel Frank-akafuridzirwa chigaro chekupfeka chena uye Pierre Jeanneret -akafemerwa macheya mune nhema velvet. Sezvakamboitika, pane kusimbiswa kwakasimba pamusoro pechiedza chinodziya, chisina kunanga, icho chave chichifungidzirwa kufungidzirwa kuti chigadzire kupenya kwakapfava uye kuvhenekera midziyo yakamisikidzwa senge bhawa uye tafura yekugashira uye mwenje weChristian Liaigre chena yendarira pasi kugadzira maratidziro echishongo kuiswa kwebhokisi.
Mukati memukova wehotera, ISC yakabatana nevamhizha vemuno kugadzira chivezwa che totem cheakaunganidzwa, columnar basalt slate kubva kumaodzanyemba kweIceland. Kukwira padhuze nemamita mana kukwirira, kufemerwa kwechivezi kunowanikwa mune echinyakare maCairns anoita sezviyeuchidzo mudunhu reIceland. Inopenya zvine simba nemagetsi nemwenje uye yakakomberedzwa nebhenji rebasalt, iyo totem yakazara nematehwe akasviba emakwai, dema dema uye mapiro esirika, ichiva nzvimbo yekuunganira kuona nekuonekwa pakati penzvimbo yekutandarira. Padhuze neizvi, yakafuridzirwa nechiono cheaurora borealis (Mwenje yekuchamhembe), ISC ine vhidhiyo yakadhiza maNzira ekuchamhembe uye yakagadzira inonyudza, matatu mativi uye emuchadenga mifananidzo yedhijitari akanaka egirini nepepuru mafungu ekutamba. Inowanikwa munzvimbo yekutandarira, inokonzeresa kuita uye nemanzwiro, zvakafanana nekupupurira zvakasikwa mudenga reIcelandic husiku… asi munyaradzo, kudziya, uye hukama hwepedyo kwenzvimbo yekutandarira neyekupinza moto. Tinodaidza kuti maNorth Lights pane zvinodiwa.
Inowanikwa kubva kunzvimbo yekutandarira, pasi pevhu zvakare musha weTides, siginicha yekudyira ine yega yekudyira imba, uye kofi ine zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakagadzirwa, uye Tölt, bhawa repedyo rinotora zvarinoreva kubva kuLondon EDITION's inohwina mubayiro Punch Kamuri. Tides, ine tara yekunze uye iyo yekumberi yekumvura, inobatsirwa naGunnar Karl Gíslason - chef ari kuseri kweDill, Reykjavik's inonyanya kufarirwa New Nordic Michelin-nyeredzi yekudyira. Iwo akapfuma uye akaomesesa epakati akafungidzirwa achifungidzirwa shanduko isina musono kubva masikati kusvika husiku, iine mawindo epasi-kusvika-padenga ayo, mukati mezuva, anovhenekera mwenje wechisikigo pamakoramu ekongiri akaumbirwa uye neoiri yemafuta ehuni madota senge anoshamisa akapenya siringi , fenicha dzakasiyana siyana, uye yepakati-yakakomberedzwa-yakaita bar- pamusoro iyo yakaturika yakagadzirwa-yakagadzirwa nendarira uye alabaster chandelier nemunyori ane mukurumbira wechiFrench, Eric Schmitt. Mangwanani, mangwanani emangwanani isanganiswa nyowani, ine muto wakachena, zvinwiwa, michero, zviyo uye skyr (Icelandic yoghurt) inowedzerwa neiyo la carte menyu yemidziyo inopisa uye sarudzo yemasikati sandwich. Kwekudya kwemasikati uye kwemanheru, Gíslason anoshandisa chikafu chazvino cheIcelandic, nemazano asinganzwisisike enzira dzetsika dzekubika, dzakanangana nezvigadzirwa zvemwaka nemhando yepamusoro yezvinhu zvepasirese zvakanyanya kubikwa pamoto wakashama. Pamwe padhuze neyakawandisa pasi rose waini runyorwa, tarisira madhishi senge yakatwasuka saradhi yakavezwa neyakaomeswa oyster howa ane makore soy muto uye maarumondi akagochwa, Arctic char yakazara yakazara nemoni, dhiri negariki ruomba, yakabikwa Atlantic cod, yakakangwa mbatatisi, yakavhenganiswa miriwo uye bota gwayana fudzi rakarukwa uye rakanonoka rakakangwa, hanyanisi hanyanisi mindi nemaapuro, uye dhizeti, Tides karoti keke, buttermilk ice-cream, karoti uye gungwa buckthorn jam, ine yakakangwa karaway mafuta. Kune zvakare vhiki yevhiki brunch menyu uye husiku hutatu pavhiki, Iyo Counter, yakatarisana nemitambo yakavhurika kicheni, ichashandira iyo masere-kosi yekuravira menyu newaini joiri yevanosvika vanhu gumi. Zvichakadaro avo vanotsvaga chimwe chinhu chisina kujairika vanogona kupinda mubhekari uye kahawa yekofi uye kusarudzwa kweanenge akabikwa crowberry scones kune anonaka svutuguru kana rye chingwa sandwiches uko vashanyi vanogona kudya kana kutora.
Kune rimwe divi rinotarisana nerevabhuti, kure nemeso ekutsvagisa, Tölt - akatumidzwa zita rakasarudzika reshanu bhiza reIcelandic rinozivikanwa - ibhawa rinotonhorera, rakagadzirwa senzvimbo yakavanda ine matatu epedyo ane mavara akajairika ane pateni yakafemerwa neyakajairwa Icelandic geometry, teak tambour madziro, akapisa orenji mabiko uye pony bvudzi poufs iyo yakakomberedza yepakati pehuni. Kunze kwemakoto aya, iyo nzvimbo yakavezwa pamwe neakapfuma walnut siringi mapaneru, uye pasi, yakajairwa-yakagadzirwa walnut chandelier uye pasi-kune-siringi windows iyo inoratidzira maonero eHarpa. Kumashure kwebara rakasvibira-marble-rakavhenekerwa masherufu esimbi akwegura akamiswa pasiringi, ayo anogadzira kupenya kwakadziya pasi payo yekunakirwa nemenyu yemakokora akafuridzirwa neIcelandic tsika vachishandisa yemuno mweya yeIceland.
Yakagadzirirwa kuve nzvimbo yayo yega, Iyo Roof iri pahotera padanho rechinomwe uye inopa panoramic gomo, North Atlantic Ocean uye yekare guta vistas. Nzvimbo inovandudzika inogona kupatsanurwa nemusuwo wegirazi wezviitiko zvakavanzika inoitendera kuti ive nzvimbo yakanakisa kubva kwahwo kunakidzwa kusingaperi kwemanheru anopenya ezhizha pamwe nemagetsi emashiripiti ekuchamhembe mumwedzi inotonhora. Girazi-kune-siringi girazi mikova yakavhurika pane yakakura yekumonera-yakatenderedza mwaka wekunze terace, yakapararira nenzvimbo dzakasununguka uye gomba hombe remoto, nepo yakapusa-matema emukati inogadzira yakangwara kumashure isingakanganise maonero. Pano, iyo yakasarudzika vibe inowedzerwa neiyo diki menyu yezvinyaradzo zvekudya senge yakabikwa flatbreads, yakashongedzwa sandwiches uye matsva masaradhi. Kubva pane ino nzvimbo yepamusoro, zviri pachena kuti Ian Schrager akagadzira hotera iyi zvichienderana nemaonero kubva kuimba yacho.
Ichizaruka pamusoro penzvimbo dziri pasi pedenga remba, dzimba dzevaenzi makumi maviri neshanu nema suites zvakagadzirwa senzvimbo dzinodziya, imwe neimwe iine mibhedha yavo yakatarisana nepasi-kusvika-padenga windows iyo inogadzira maonero akasiyana enharaunda yakapoterera. Vamwe vanouya vakazara netara yekunze, nepo vese vari iwo maitiro eiyo YEMAHARA maratidziro maitiro kune ano emhando yepamusoro neakavanzika emuno kuravira. Palette yakanyoroveswa yematanda ehuni neakajeka grey oak inoshanda senheyo inodziya yeimwe fomati yemadziro kongiri, fenicha inogadzirwa netsika yeItaly, mabhedhi emhangura mwenje masikisi, faux fur rugs, nemifananidzo uye zvishongedzo kubva kune mhizha dzenzvimbo, senge iwo mubhedha wakajeka kukanda nekambani yemuno yemakushe, exstex, ceramics nemunyori Guðbjörg Káradóttir, uye mumakamuri ehunyanzvi nevanozivikanwa veIcelandic artists Pall Stefansson naRagnar Axelsson vachiratidzira nzvimbo dzeIcelandic, zvakasarudzika kuEDITION. Zvichakadaro, dzimba dzekugezera dzemonochrome netsika dzakagadzirwa nemaoko chena maceramic matiles akagadzirwa muItaly, anowanikwa nechena machena zvisina maturo, matte nhema zvishongedzo, uye fittings padhuze netsika Le Labo zvimbuzi zvekunhuhwirira kwakasarudzika. Kubva panzvimbo yayo yepamusoro yekona pane yechitanhatu pasi, iyo yekurara imwe Penthouse Suite - iine yayo yega teru ine yakaisvonaka chiteshi chengarava, Harpa uye makomo maonero anoenderera mberi achiwedzeredzwa neakajeka, mwenje akazadzwa anoyevedza emukati epurush tsika fenicha mune yakasviba oatmeal matoni. Penthouse Suite inosimudzirwawo neiyo yekugezera yakanyanya ine Italian machena machena uye nzvimbo yepakati yemoto zvakare.
Iyo Reykjavik YEMAHARA inopa yemisangano yemazuva ano uye nzvimbo dzezviitiko, kusanganisira anoshanduka studio, boardroom ine yakasikwa mwenje, bleach oat-wide plank floorings, uye huru ballroom ine pre-basa nzvimbo. Iyo inoshanduka ballroom ine pasi-kune-siringi girazi windows inokamurwa kuita nzvimbo mbiri dzakaparadzaniswa, nepo mahombe magirazi magonhi akafara zvakakwana kuti agone mota. Mukati meimba yebhora pane yakarembera alabaster chandelier paired ne echisikanzwa akanzwa machira akafukidzwa akatenderedza ballroom.
Iyo yepasi pasi pevhu imba yeSunset, kuvhura gare gare gore rino, inotonhorera yepasi pehusiku nzvimbo ine mamiriro-e-iyo-e-kurira system uye mwenje wemitambo unovhenekera rima uye rinotyisa dema kongiri yemukati ine yakasviba cast kongiri bar. Zuva rovira rinogona kukamurwa munzvimbo nhatu nekuwana kubva kuhotera neHarpa square. Pamwe chete neyemhondi cocktail menyu uye inoenderera irosta yezviitiko, iyo kirabhu ichatamba inomiririra kune vamwe vepasirose DJs nevatambi, vachizvitora senzvimbo yazvino isingarambike muReykjavik inowanda husiku husiku chiitiko. Iko kune zvakare yekuvanda yekupinda kune avo vanoda iyo yepamusoro kugona. “Chingadai chiri chiroto kuvhura Studio 54 kuno uko rima rinogara kwemwedzi mitanhatu kwete kwemaawa masere sezvarinoita kuNew York City. Ingadai yakave nzvimbo kwayo "akadaro Schrager.
Zvakare, pauriri hwepasi pevhu pane yekurovedza muviri, iyo inosunganidzwa neepamberi-ye-iyo-iyo nhema nhema simba rekudzidziswa, huremu, uye cardio michina, zvisinei, ipfungwa yemagariro kuSpa ndiyo imwe yakasarudzika zvinhu pahotera uye zvinonyatsoisa Iyo Reykjavik YEMAHARA yakaparadzaniswa. Pamwe chete nemakamuri matatu ekurapa, hammam, imba yemhepo, sauna, uye padziva redziva iro rinopa hydrotherapy, kune zvakare nzvimbo yekutandarira ine spa bar, iyo zuva nezuva inoshambadza menyu nyowani ine hutano hwemashure Workout Viking inodedera, champagnes uye, inonaka moss. vodka infusions padhuze nezvikafu zvishoma senge volcano chingwa chine dema rava munyu. Izvi zvinonyanya kunakirwa muGeothermal mvura inoshambira dziva pamwe chete nemaminetsi makumi matanhatu ekurapa kweSundown Spa, iyo inosanganisira inosimbisa muviri kukwiza muviri uye inotonhorera onyx scalp massage. Inowanikwa yakanangana neSunset, iyo Spa ndiyo yakanaka pre-pati pamper nzvimbo kuti iwe ugadzirire zvakakwana kune epic manheru emafaro. "Spa uye nzvimbo yehutano ine bhawa chimwe chinhu chatisati tamboona," anodaro Schrager. “Asi kuenda zasi uko uye kushamwaridzana nekunwa uyezve kupinda mumvura inopisa, zvakare, mhinduro yekuve muIceland. "